Mudaharaado habeenkii labaad ka dhacay magaalada Suways ee dalka Masar. |
Mudaharaado habeenkii labaad ka dhacay magaalada Suways ee dalka Masar.
Wararka ka imanaya dalka Masar ayaa sheegaya in habeenkii labaad ay mudaharaaddo lagaga soo horjeedo Madaxweyne Cabdifataax Al-Siisi ka dhaceen magaalada Suways.
Wakaaladda wararka ee AFP ayaa soo xigatay dad magaaladaa degan oo sheegay in habeenkii Axaddu soo gelaysay ay isku dhaceen booliska iyo boqolaal qof oo mudaharaadayey.
Waxaanay AFP sheegtay in dadka bannaan baxayey doonayeen in ay tagaan badhtamaha magaalada laakiin ciidamada nabad gelyada la soo dhoobay faras magaalaha.
Dadka ayaa baraha bulshadu ku xidhiidho ee internet-ka isku weydaarsanayey muuqaalo ay sheegeen in ay yihiin kuwo laga duubay mudaharaadada Suways ka dhacaya.
Dhanka kale ciidamada nabadgelyada Masar ayaa sidoo kale la dhigay fagaaraha Maydaan Al-Taxriir ee badhtamaha magaalada Qaahira, ka dib markii dad badan oo isku soo baxay damceen in ay halkaa isugu tagaan.
Dad xuquuqda aadanaha u ololeeya ayaa sheegay in ciidamada nabadgelyadu xidheen tobanaan qof oo ka mid ah dadkii banaan baxyadaa kooban kaga qayb galay meelo kala duwan.
Mudaharaadadan ayaa loo arkaa in ay yihiin kuwo lama filaan ah, waxaanay dadka ka soo horjeeda Al-Siisi ku tilmaameen bannaan baxyadaasi in ay “jabiyeen gidaarkii baqaha ee shacabka Masar ku deyraa”.
Laakiin taageerayaasha Al-Siisi waxay sheegayaan in mudaharaadadaa dhacaya la siiyey muhiimad ka weyn inta ay istaahilaan, waxaanay sheegeen in ay dadka ka dambeeyaa ku guul darraysteen in ay muwaadiniinta ku qanciyaan bannaan baxyada.
Masuuliyiin Masaari ah ayaa sheegay galabnimadii Sabtida in guri ciidamada nabadgelyadu u daateen oo ku yaal bariga magaalada Qaahira lagu dilay mid ka mid ah xubnaha dhaqdhaqaaqa ‘Xasm’ oo xukuumaddu ku tilmaanto in ay qayb ka yihiin ururka Ikhwaan Al-Muslimiin ee dawladdu u taqaan “urur argagixiso ah”.
War saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arimaha gudaha dalkaasi ayaa lagu sheegay in ciidamada nabadgelyada iyo rag halkaa ku jiray tacshiiraddii ay is waydaarsanayeen uu ku dhintay ninkaasi, laba askarina ay ku dhaawacmeen.
Warku wuxu intaa ku daray in halkaa laga helay hub badan, xadhkaha kooraanka oo badan iyo walxaha qarxa iyo sidoo kale jaakadaha aan rasaastu karin.